သင်ခန်းစာ: သင်၏ Kindle တွင်စုဆောင်းမှုတစ်ခုဖန်တီးပါ eReaders အားလုံး
သင်ခန်းစာ - သင်၏ Kindle တွင်စုဆောင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle နှင့်မည်သည့် eReader နီးပါးတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုမှာ၎င်းတွင်ရှိသည် ဒီများသောအားဖြင့်ထုတ်ပေးသောအကျိုးဆက်ရောဂါနှင့်အတူ eBooks ၏စုဆောင်းခြင်း။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရောဂါကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြမယ်ဆိုတာငါပြမယ် သင်၏ Kindle တွင် collection များကိုဖန်တီးပါ သင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်တွေကိုစုစည်းပြီးသိမ်းထားနိုင်ဖို့ သင်၏အမေဇုံစက်ကိုစုံလင်စွာမှာယူပါ.
စုဆောင်းမှုတစ်ခုသည်၎င်းတို့အားလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်ရန်၊ စီမံရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော Kindle ရှိအကြောင်းအရာများကိုအုပ်စုဖွဲ့ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။
သင်၏ eBooks များအပြင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို၎င်းတို့တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်
collection များကို WiFi မှတစ်ဆင့် Amazon ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းကောင်းအကျိုးကျေးဇူးများဖြင့်သိုလှောင်ထားသည်
မူလမြင်ကွင်းတွင်ပင်မ menu ကိုသွားပြီးရွေးစရာကိုရှာပါ «စုဆောင်းမှုအသစ်ဖန်တီးပါ»
Kindle ဖန်သားပြင်ပေါ်လိမ့်မည် box ၌သင်ဖန်တီးလိုသောစုဆောင်းမှုကိုနာမည်ပေးပြီး option ကိုပေးပါ။ "သိမ်းပါ"
ယခုသင်သည်သင်၏စုဆောင်းမှုအသစ်တွင် eBooks သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုစတင်သိမ်းဆည်းရန်သာလိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းအတွက်သင်သည်မီနူးကိုသာပြသပြီးရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။ «ဒီစုဆောင်းမှုထဲထည့်ပါ»
ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် collection များကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းသည် Amazon ထုတ်ကုန်များတင်ထားသောအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ Kindle တွင် collection များကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုလေ့လာရန်သင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိခဲ့သလားသို့မဟုတ်၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်သုံးပြီးပြီလား။ သင်ဆဲမသိလျှင် Kindle ဖတ်တဲ့ပုံစံကဘာလဲခင်ဗျားတို့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ link ထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - သင်ခန်းစာ - နောက်မှဖတ်ရန်သင်၏ Kindle သို့စာရွက်စာတမ်းများပို့ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » သင်ခန်းစာ - သင်၏ Kindle တွင်စုဆောင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ
John Edisson ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ တစ်ချိန်ကလွန်ခဲ့သောဘလော့ဂ်ကိုကျွန်ုပ်ပုံမှန်ဖတ်ရှုခဲ့ပြီး၊ သင်လုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုချီးကျူးပါသည်။ ငါသည်ငါ့ Kindle Paperwhite အပေါ်ခြေလှမ်းများကိုဖြတ်သန်းသွားပေမယ့် "Create New Collection" option ကိုမီးခိုးရောင်ဖြစ်နေပြီးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား။
Jhon Edisson အားပြန်ကြားပါ
ငါထင်တာကတော့မင်းစာဖတ်သူကို Amazon စာမျက်နှာမှာမှတ်ပုံတင်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့သင့်ကို collection တွေဖန်တီးဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။
အတိအကျ collection များကိုဖန်တီးရန်အတွက်သင်၏ Kindle ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါစာအုပ်တွေကိုစုဆောင်းမှုတစ်ခုထဲထည့်လိုက်တယ်၊ သူကသူတို့ကိုဖြတ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကရှေ့စာမျက်နှာမှာပေါ်နေတုန်းပဲ။
jabaal ၁၂ ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာငါ kindle အကြောင်းကိုငါမကြိုက်အနည်းဆုံးအရာတစျခု။ သင်၏ pc တွင်ဖိုလ်ဒါများ ဖန်တီး၍ ၎င်းကိုစုဆောင်းထားရာမှအရှေ့လိပ်ကိုဖယ်ထုတ်သည့် pendrive တစ်ခုကဲ့သို့၎င်းကို kindle သို့ဆွဲခေါ်သွားနိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်ရှိသည်။ သူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ငါငါ့အ Papyre အဟောင်း ...
ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ် ဖိုင်တွဲများနှင့်ရွေ့လျားစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးပြီးနောက်စာရွက်စာတမ်းများသည်အသံဖြင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲပင်မစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကို၎င်းတို့အားအဓိကအရာမှဖျက်လိုက်လျှင်၎င်းတို့သည်စုဆောင်းမှုမှဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီလား။ '??
Klele ၏စုဆောင်းမှုသည် Amazon တွင်သင်ဝယ်သောစာအုပ်များနှင့်သာအလုပ်လုပ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်စာအုပ်များထည့်သောအခါထိုစာအုပ်များကိုသင်သိမ်းဆည်းထားသည့်စုဆောင်းမှုသည်သူတို့ကိုဘယ်တော့မျှပြလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းဗလာဖြစ်နေလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ebook နဲ့ခရီးသွားခြင်း - ငါဘာလမ်းညွှန်ကိုယူသလဲ။
Tolino Shine: Android နှင့်စာဖတ်သူအသစ်